Ukusekela nokucindezeleka Ukudubula kudivayisi yakho ye-Ultrasonic
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic akhelwe kumazinga aphezulu embonini. Uma kwenzeka ubhekana nanoma iyiphi inkinga noma isici, sicela usazise! Ithimba lethu lokusekelwa lizokujabulela ukukusiza ekutholeni i-unit yakho ye-ultrasonic ukuthi isebenze futhi ngokushesha.
Yenza i-self diagnosis
Uma ubhekene nanoma iyiphi inkathazo ngedivaysi yakho ye-ultrasonic, ungenza ukuzivikela okulula. Sicela ulungiselele ukuxilongwa ngokuhlola okulandelayo okudingekayo.
Sicela uzijwayeze ngezincwadi zokubhala kanye nokucaciswa kobuchwepheshe bedivayisi ye-ultrasonic. Uma imishini yakho ye-ultrasonic inesikrini sokuthinta, sinikeze ikhophi elithambile yamakhodi ekhadini le-SD eliza neyunithi yakho.
Zonke izingxenye zedivayisi, amakhodi nama-plugs kufanele abe omile futhi akhululeke ezifweni ezibonakalayo. Amakhodi angaphezu kwamamitha amabili ubude kufanele avuliwe.
Zonke izitolo ze-fan akufanele zivinjelwe. Sicela ubheke kubhukwana mayelana nokushisa okuphezulu okuphezulu kwedivayisi yakho ye-ultrasonic. Idivayisi akumele ibe yimanzi noma emanzi ngaphakathi kwe-electronics noma ama-plugs.
Xhuma imishini yakho ye-ultrasonic endaweni yokuphuma kwamandla we-voltage ekhethiwe kanye ne-amperage eyanele. Kunconywa ama-fuses amancane asebenzayo.
Uma idivayisi yakho ye-ultrasonic ine-slot yekhadi le-SD, sicela ufake ikhadi le-SD ngaphandle kokuvikelwa kokubhala.
Sicela uhlole i-sonotrode, i-booster nophondo ngokucophelela ukuxoshwa noma ukulimala. Ukumiswa kwe-cavitational ezindaweni ezisebenzayo ukugqoka nokulala okuvamile okuvela ku-cavitation ye-ultrasonic.
Ukuqhamuka kokuxhumana kanye nezintambo ze-sonotrode, i-booster nophondo kumele zihlanzeke, zome futhi zingenasici. Sula izakhiwo nge-ethanol bese uziyeka ngaphambi kokukhuphuka.
Beka i-sonotrode kakhulu ngokuqinile. Sicela ubone imiyalelo ebhukwini. Ukunyuka okuqinile kwe-sonotrode kanye ne-boosters kubaluleke kakhulu.
Uma ngabe idivayisi yakho ye-ultrasonic inesikrini sokuthinta, sicela uhlole izilungiselelo bese usetha kabusha ukulinganiswa. Sicela ubeke isikhathi nosuku ngendlela efanele.
Sicela ulungise ukulinganisela ku-100% futhi umjikelezo ube ngu-100%.
Lungiselela i-beaker noma ibhakede ngamanzi kampompi azokwazi ukulinganisa usayizi wakho we-sonotrode. Amanzi kufanele abe nokushisa kwamakamelo.
Gqoka ukuvikelwa kwezindlebe nezinkuni! Ezinye izinto zokusebenza zokuphepha zingadingeka ohlelweni lwakho lwe-sonication.
Manje, ukuthi zonke izidingo zihlangene, sicela wenze lokhu okulandelayo.
Qala idivayisi ye-ultrasonic emoyeni.
Uma idivayisi ye-ultrasonic iqala, sicela uqaphele phansi amandla okusebenza ku-watts. Akuwona wonke amadivaysi e-ultrasonic afika nemitha yamandla noma ngokubonisa amandla kusikrini sokuthinta.
Uma ngabe idivaysi yenza imisindo enkulu noma iqala ukushayela, sicela uqaphele lokhu phansi. Ukulandelana okufutshane kwevidiyo kungasisiza ukuthi sikusize.
Uma idivayisi ye-ultrasonic ingaqali, sicela ubeke i-sonotrode ehlukile uma ikhona. Bese uphinda.
Uma ngabe i-ultrasonic idivayisi ingakali ukuqala emoyeni, sicela ume lapha futhi uxhumane nathi.
Uma idivaysi ye-ultrasonic isebenza emoyeni, khona-ke faka i-sonotrode edlidliza kancane kancane emanzini. Ukuphalaza kwamanzi kungase kwenzeke. Sicela ubuke imitha yamandla noma ukubonisa amandla kusikrini sokuthinta. Amandla e-ultrasonic kufanele akhuphuke, njengoba ufaka i-sonotrode ejulile emanzini.
Uma idivaysi ye-ultrasonic ivama ekuthintaneni kokuqala kwe-sonotrode ngamanzi, sicela uphakamise i-sonotrode noma i-booster ehlukile uma ikhona. Bese uphinda.
Uma amadivaysi akho e-ultrasonic ayeka ezingeni lezamandla, lokho kungaphansi kwamandla okuqokwa, sicela uxhumane nathi.
Sicela uqaphele noma yimiphi imilayezo yesimo noma iphutha.
Uma idivayisi yakho ye-ultrasonic igijima ngamandla aphelele lapho i-sonotrode igxiliwe ngokugcwele, sicela uyivumele igijimele imizuzu engu-5 kuya kweyishumi. Ukusetshenziswa kokuma kunconywa amadivayisi amakhulu ama-ultrasonic.
Uma izinyathelo ezingenhla zingayixazululi inkinga yakho, sicela uxhumane nathi! Sicela ungazami ukwenza ukulungisa ngaphambi kokuthi uzwe ngathi. Sicela usinikeze imininingwane enemininingwane mayelana nokusethwa kwakho kwe-ultrasonic kanye nenkinga yakho. Sicela usisize ukukusiza, ngokusithumela imininingwane elandelayo! Ithimba lethu lokusekelwa lizothintana nawe ngokushesha okukhulu!
Sicela usinikeze inombolo yakho ye-serial yedivayisi. Uma unesidingo esinesikrini sokuthinta, sicela uye kuzilungiselelo bese upheqa phansi kwesigaba sokwaziswa. Sicela usithumelele izinombolo zezingxenye ze-hardware nesofthiwe, futhi.
Sicela uthathe izithombe eziningana zedivayisi yakho ye-ultrasonic, izesekeli kanye nokusetha kwakho okuphelele. Lokhu kufaka phakathi isithombe sokusetha lapho kwenzeka khona inkinga. Isithombe sokwemisa emaceleni kwendawo ye-sonotrode singasenza sikwazi ukulinganisa isimo sokugqoka nokukhala.
Sicela usithumelele incazelo eningiliziwe yenkinga yakho nanoma yimiphi imilayezo yephutha oyibona.
Chaza izimo ngaphansi kwenkinga eyenzekayo. Lokhu kufaka phakathi izinto eziphathekayo, ezifana nokushisa, uhlobo lwe-liquid, i-viscosity, ivolumu nokucindezela ketshezi. Uma usebenzisa ipompo, cacisa uhlobo futhi wenze futhi ufake isithombe.
Thatha isithombe noma ukulandelana kwevidiyo emfushane okubonisa inkinga noma umyalezo wephutha ngesikhathi kwenzeka.
Uma ngabe idivayisi yakho ye-ultrasonic inekhadi le-SD, sicela usithumelele amafayela e-CSV alotshwe ngesikhathi sokudubula kwenkinga, ngenkathi inkinga yakho ivele. Uma kutholakala kufaka ifayela le-CSV ye-sonication yokugcina, ngaphambi kokuba inkinga ivele.
Uma usithumela ulwazi, sicela uzame ukugcina usayizi wesinamathisela ongaphansi kuka-6 MB inani. Sebenzisa ukusetshenziswa kwe-ZIP uma kunesidingo.
Ifomu Lokucela Ukusekela Ubuchwepheshe
Sicela fomela ngezansi noma uthumele i-imeyili enezinamathiselo ku-service@hielscher.com
Ukulungisa Ungabeki esikhundleni
Noma ngabe isici senzeka ngemuva kweminyaka eminingi yokusebenzisa kakhulu, kunengqondo ukuqonda ukulungisa amadivayisi we-Hielscher ultrasonic esikhundleni sokuwabuyisela. Ukulungiswa kudinga izinsiza ezingaphansi kakhulu futhi kunobungane bemvelo. Ithimba lethu lokusekelwa kwezobuchwepheshe lizokusiza nganoma yiluphi ulwazi lokudubula okunenkinga noma lokulungisa. Ukusebenza ngamadivaysi e-Hielscher e-Hielscher anenani elihle lokuthengisa kumapulatifomu wemishini esetshenzisiwe noma i-Ebay. Osomabhizinisi nokuqalisa ezobuchwepheshe bahlala bafuna imishini esetshenzisiwe ye-Hielscher. Uma ungasenakho ukusetshenziswa okwengeziwe kwe-homogenizer yakho ye-ultrasonic, cabanga ukuyinikela ekolishi lasekhaya noma eyunivesithi. Kungaba nomthelela ekutholakaleni okukhulu kwesayensi lapho.
Ukuhlolwa kokuguguleka kweCavitation
Amaphakheji Amandla Womhlaba Wonke Wezingxenye Zama-Ultrasonic
UPcontrol V2.3 WIN – I-PC-Interface
Hielscher Cascatrode – I-Surface High Sonication Probe
ukufakwa kwe-UIP2000hdT ukuze kukhishwe
14513 iTeltow, eJalimane
Ifeksi: +49 3328 437-444
Sicela ugcine imishini yakho ye-ultrasonic njalo.